> Resource > iPad > iPad shawladda kaabta: Sida loo Waraaqda kaabta iPad
Haddii aad ula kac loo tirtiray files on your iPad oo doonaya in ay helaan jid ay ugu soo kaban iyaga, ama aad rabtid in ay helaan iPad gurmad file on your computer, waxaad tahay meesha hadda. Maqaalkani waxa uu ku tusayaa sida aad Macdan files ka iPad gurmad, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, xiriirada, fariimaha, qoraalo, iyo sidaas. Akhri wixii faahfaahin ah.
iPad gurmad shawladda: Ogow dhammaan macluumaadka aad hore
users iPad waa in la ogaado in Lugood abuuraa file ah oo gurmad u ah iPad marka aad u hagaagsan aad iPad la, halka gurmad waa database-aqrin. Waxaad u baahan tahay si aad u soo saaro ka hor akhriyo. Sida loo soo saaro gurmad iPad? Waa kuma sidii ay adag tahay sidii aad u malaynayso. Iyada oo ah iPad qalab gurmad shawladda, oo aad samayn kartaa iyada oo aan wax dadaal ah. Haddii aad qabto wax fikrad ah kama saabsan gurmad iPad shawladda for Windows ama Mac, halkan waxaad heli kartaa aan soo jeediyo: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) , ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows). Labada versions Mac iyo Windows ee software-ka waa gabi ahaanba amaan oo lagu kalsoonaan karo. Waxaad u isticmaali kartaa si aad u soo saaro iPad files gurmad in 2 tallaabo ah, oo aad ku eegaan kartaa dhammaan xogta aad gurmad iPad ka hor inta aanay soo saarida.
Download version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah si ay leeyihiin isku day ah. Dooro mid ka mid xaq nidaamka your computer ee.
Fiiro gaar ah: Si aad u soo saaro gurmad iPad, waxaad kala soo bixi kartaa version mid ka mid ah barnaamij kor ku xusan. Dhammaan iyaga u ogolaan inaad si fiican u samayn.
No arrinta version Mac ama version Windows aad ku dhaqmaadka, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoose si aad Macdan aad gurmad iPad. Halkan waxaan ku qaadan version Windows ah tusaale ahaan (Talaabooyinka la version Mac ka mid ah ay yihiin).
Step1. Orod gurmad iPad shawladda iyo dooro file gurmad
Orod gurmad iPad shawladda for Windows on your computer ka dib markii ay ku rakibidda. Furmo suuqa ugu weyn ee ka soo muuqan doonaa sidii dabagal. Halkan dhan hayaan aad qalabka Apple ayaa la soo baadhi karo. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah si aad u iPad oo guji "Start Scan" in ay sii.
Step2. Waraaqda iPad gurmad files
Scan ka dib, waxaad ka heli kartaa warbixin ka hooseeya, halkaas oo ay dhammaan xogta ku gurmad iPad waxaa lagu soo bandhigay qaybaha. Iyaga Guudmar mid mid guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Talooyin: Si looga fogaado khasaare xogta, waa lagama maarmaan in ay dib u kor xogta aad si joogto ah, si aan ugu welweshaan doonaa waxa ku saabsan markii weerar masiibo aad.